Heshiiska ay Gashay JXSG Waa in Uusan Noqon Mid Fudud oo ku Ekaada Iyaga [jxsg] – Rasaasa News
Heshiiska ay Gashay JXSG Waa in Uusan Noqon Mid Fudud oo ku Ekaada Iyaga [jxsg]
May 16, 2010 Heshiiska ay Gashay JXSG Waa in Uusan Noqon Mid Fudud oo ku Ekaada Iyaga [jxsg]
Jabhada Xoraynta Somali Galbeed [JXSG], oo dhaliyey gool siyaasadeed oo taageero badana ka helay dadweynaha Somalida Ogadeeniya, dhamaystirkiisa siyaasadeed waxaa uu ku xidhan yahay Itobiya.
JXSG, oo si qarbo qarbo ah kula gashay heshiis nabad ah xukuumada Itobiya, ayaa ku andacootay in heshiiska ay ku hambooriyeen dadweynaha Somalida Ogadeeniya oo iyagu aad ugu baahnaa nabad galiyo, “waxay u buqdeen sidii dad xabsi ku jiray” Sheekh Ibraahin Xuseen ayaa yidhi mar uu shirka ka hadlayey.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayaa waxaa haystay cadaab aan lahayn meel looga ciirsado, oo khasbay in kumaankum ay iskaga cararaan dalka, kuwaas oo qaxooti ku ah dalalka dariska.
Waxaa kale oo xabsiyo kala duwan ku jiraa kumanaan maxbuus oo ku eedaysan in ay qayb ka ahaayeen dagaalada lagula jiray dawlada ee ay wadeen Jabhadaha Somali Galbeed iyo ONLF.
Dadweynaha jooga gabalka ayaa ku noolaa cabsi iyo nolol xumo ay keentay colaada u dhaxaysay Jabhadaha iyo ciidamada dawlada oo aan midkoodna u roonayn dadweynaha.
Jabhadaha ka dagaalama dhulka Somalida Ogadeeniya oo muddo dagaal kula jiray xukuumada Itobiya, ayaa waxaa soo foodsaartay siyaasad xumo iyo colaad iyaga dhexdooda gashay, waxaana ka jeedsaday dadweynaha Somalida Ogadeeniya oo joojiyey taageeradii.
Colaadaas dhex gashay Jabhadaha ayaa waxay keentay in JXSG, oo iyadu ahayd Jabhadaha ka dagaalama dhulka Somalida, ay qaadato mawqif siyaasadeed oo dawaynaya dhibaatooyinka dadweynaha haysta iyo waliba colaada siyaasadeed ee dhextaal Jabhadaha, oo keentay in dadweynihii halganka taageeri jiray ay ka qancaan Jabhadaha.
JXSG, oo sida ka muuqata sansaanka socda aan qaadan aragtiyo siyaasadeed oo dumi kara siyaasiyiinta iyo aqoonleeyda mooraal jabsan ee ka qancay Jabhadaha siyaasad xumaaday, balse jecel in ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya xuquuqdooda ku helaan hanaan nabadeed.
Dawlada dhexe ee Itobiya ayaan iyadu u muuqanba in ay danaynayso heshiiska JXSG, heshiiska ayaa ilaa iyo hada u muuqda mid u dhaxeeya Ismaamulka Somalida Ogadeeniya [gabalka 5] iyo Jabhada Xoraynta Somali Galbeed ama hadaan si kale u idhaahdo u muuqda dalxiisayaal indhaha ka buuxsanaya dalka.
Dhab waxaa ah in fursada siyaadeed ee maanta hortaal JXSG, ay tahay mid qaali ah oo ay ku matali karto dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee iyagu maanta ku daba fadhiya nabada ka soo yeedhay JXSG.
Waxaa iyana dhab ah in maanta ay Itobiya hortaal fursad nabadeed oo u baahan in ay Itobiya si dhab ah u wajahdo iyada oo bixinaysa waxa ay muddan yihiin dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Maadaama ay jiraan dood ah aynu wax yar dhawr sida loola dhaqmo JXSG, waxaa waajib ku ah xukuumada Itobiya in ay ka feejignaato, heshiisyo ayna dhawaan ka dhabayndoonin iyo waliba balanqaadyo been ah.
Talaabo kasta oo wanaag ah oo lagu sameeyo magaca heshiiska JXSG, waxaa uu khuseeyaa dhamaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee gaar uma aha JXSG, sida maxaabiista, cafiska dadka hore uga tirsanaan jiray ururada iyo wax ka badalka shuruucda dalka lagu dhaqayo.
Balaadhinta heshiiska dawlada dhexe ay gali JXSG, waa in uu noqdaa mid micno ku fadhiya oo qancin kara labada dhinacba [waa in aqoonleeyda iyo siyaasiyiinta u dhalatay dhulkaas ay ka munaaqashoodaan].
Qoraaga ayuu fikirka qoraalku gaar u yahay
650 Maxbuus oo la Sheegay in Laga Siidaayay Xabsiyada Jigjiga
Jwxo-shiil, oo Ergo u Dirsaday Addis Ababa, Ina-dhuubana Abaabul Dagaal Ugu Diray Gudaha Ogadeeniya.